Abahloli 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Izintokazi.Inhloso ukubamba noma ukukhubaza izingcezu zomphikisi. Umdlali okwaziyo ukudla ngamunye wezingcezu zomphikisi uwina umdlalo. Sikhuluma ngomunye wemidlalo yebhodi eyaziwa kakhulu futhi idlalwe emhlabeni.
Umdlalo wamaCheckers udlalwa phakathi kwabadlali aba-2, ebhodini lesikwele, lezikwele ezingamashumi ayisithupha nane ngokunye ukukhanya nokumnyama, nezicucu ezimnyama eziyishumi nambili ezimhlophe nezilishumi nambili.
Abahloli: Ungadlala kanjani igxathu negxathu?
Ukudlala ama-checkers online mahhala, kufanele nje qhubeka le miyalo:
Ngokushesha nje lapho ufaka isiza, umdlalo uzoboniswa esikrinini. Kufanele kuphela hit play futhi ungaqala ukukhetha ukucushwa okuthandayo. Uzokwazi ukukhetha phakathi kokudlala nomngani, futhi ngemuva kokukhetha, uzokwazi ukuqala ukudlala lo mdlalo.
Manje, uzothola izinkinobho ezithile eziwusizo. Can "Faka noma susa umsindo ", nika inkinobho "Play"Futhi qala ukudlala, unga"Misa kancane"Futhi"Qala kabusha”Noma nini.
Thola isitha sakho ukuhambisa kodwa izingcezu.
Ngemuva kokugcwalisa umdlalo, chofoza ku “Qala kabusha”Ukuqala phansi.
Checkers game: izici
"Damas"ngumdlalo webhodi obe khona amakhulu eminyaka nalapho kubhejwa khona ngokushintshana futhi izingcezu zingathathwa kumphikisi. Uyaphumelela lapho umphikisi engasenazo izingcezu noma ehanjisiwe ukuze kungabe kusakwazi ukuhamba.
Injongo yomdlalo "Checkers"
Umgomo "wezintokazi" uwukuthi vimba ukunyakaza komphikisi noma asuse izingcezu eziningi kangangokuba akasakwazi ukunyakaza.
Inani labadlali, iminyaka yobudala nesikhathi sokudlala:
Kusuka eminyakeni ye-6
Uhlelo lwe chess
Izingcezu eziyi-12 ezimhlophe
Izingcezu ezimnyama eziyi-12
Imithetho elula kakhulu futhi, ngakho-ke, ifanele abadlali abancane, kepha futhi iyathandeka kubantu abadala.
Umlando we "Ladies"
Iqiniso yilokho akekho owazi kahle ukuthi umdlalo uqale nini noma kanjani, kodwa okuqinisekile ukuthi amaLadies abekhona isikhathi eside, noma kunjalo Plato waqamba amanga wathi ngumdlalo owabolekelwa iGrisi eGibhithe.
Umbono wokuqala ngukuthi inguqulo endala kunazo zonke yamaCheckers yayingumdlalo owatholwa ekumbeni kwemivubukulo I-Uri, i-Iraq. Ukuqomisana kweCarbon kukhombisa lokho umdlalo wawusuvele ukhona cishe eminyakeni eyizinkulungwane ezintathu BC.
Kodwa-ke, le nguqulo obekucatshangwa ukuthi yokuqala isebenzise ibhodi ehluke ngobuhlakani, izingcezu ezihlukile, futhi akekho owaziyo ukuthi yayiyini imithetho eqondile.
EGibhithe elidala, umdlalo ubizwa I-Alquerque, ebisebenzisa ibhodi le-5X5, bekuwumdlalo ohlobene nokuhlola owawudlalwa kabanzi ngaleso sikhathi.
Izazi-mlando zalanda imvelaphi yazo 1400 BC futhi bathi ukuthandwa kwabo kwakukukhulu kangangokuba ibidlalwa emhlabeni wonke osentshonalanga ngaphezu kwezinkulungwane nezinkulungwane zeminyaka.
Cishe 1100 AD, umFulentshi wayenombono wokudlala ama-checkers ebhodini le-chess. Lokhu kusho ukwandiswa kwenani lezicucu libe yishumi nambili ohlangothini ngalunye. Le nguqulo entsha ibizwa ngokuthi "Abacasulayo"O kahle"UFerses".
Ngokushesha, amaFulentshi abuye abona ukuthi ukwenza ukuthi kube khona ukugxuma kuphoqeleke ukwenza umdlalo ube yinselele kakhulu futhi anquma ukubiza le nguqulo entsha "Jeu force".
Ushintsho oludala lwaluthathwa njengomdlalo wokuzijabulisa wabesifazane futhi lwabizwa nge- "Le Jeu Plaisant De Dames" (Umdlalo Omuhle Wabahloli).
Kusuka kumatafula kuya kumakhompyutha
Ngemithetho yabahloli echazwe amaFrance, umdlalo wathunyelwa eNgilandi naseMelika, uqhubeke nokubusa kwawo emhlabeni. Ku-G. Brittany, yathola igama " Imihlahlandlela "kanye nesazi sezibalo esidumile UWilliam Payne wabhala incwadi yakhe yezokugembula eminyakeni eyishumi nesikhombisa namashumi amahlanu nesithupha. Kodwa-ke, eminyakeni edlule, iDamas igcine ukuthandwa kwayo.
Ngakho-ke, ukulinganiselwa kokunyakaza okungu-2 kwenzelwe abadlali abanolwazi, kubaphoqa ukuthi baqale umdlalo ngokungahleliwe. Namuhla, kusetshenziselwa ukulinganiselwa kokuhamba oku-3 emiqhudelwaneni.
Amantombazane afinyelele izikrini zabahleli bama-computer ngaphambi kweMpi Yezwe Yesibili.
Yize amakhompyutha ayesesigabeni esinzima sentuthuko, i-effulgent U-Alan Turing idale uhlelo oluyisisekelo lwamaLadies oludinga ukuthi izibalo zenziwe ephepheni (ngenxa yokuthi imishini ibingakwazi ukwenza lo msebenzi).
Ekugcineni, 1952 Bekungunyaka ophawulekayo emlandweni omibalabala womdlalo, lapho U-Arthur L. Samuel udale ifayela le- Uhlelo lokuqala lokuhlola olusetshenziswa yikhompyutha. Kancane kancane, lezi zinhlelo zemidlalo zenziwa ngcono njengoba ijubane namandla ekhompyutha anda.
NgoJulayi XNUMX, ithimba lase-University of Alberta eliholwa nguJonathan Schaeffer lamemezela ukuthi balixazulule umdlalo wabahloli.
Uhlelo Chinook , ithuthukiswe yiwo wonke, ifinyelele eqophelweni ekuziphendukeleni kwayo okukhombise ukuthi alinakuqhathaniswa. Ngale ndlela, iqembu likwazile ukufakazela ukuthi i-Checkers ngumdlalo wokudweba, okungukuthi, kuzohlala kuphela ngokulingana uma bobabili abaphikisi benza iminyakazo efanele.
Kodwa-ke, umdlalo ugcina ukuthandwa kwawo, nabantu abavela kuwo wonke umhlaba bedlala izinhlobo zawo ezahlukahlukene ukuzijabulisa, beqeqesha ukucabanga kwabo okunengqondo, noma bamane nje bajabulela isikhathi esithile sekhwalithi bedlala nomndeni nabangane.
Idlalwa kanjani i- "checkers"?
Umdlali oyedwa uthola izingcezu ezimhlophe, omunye nomunye ngamunye wezingcezu ezimnyama: ngubani odlala umbala onjani, abadlali aba-2 bangakhetha phakathi kwabo.
Izingcezu bese zibekwa emigqeni engaphandle kakhulu yebhodi lomdlalo zibhekane.
Njalo nakuzo zonke izimo qala ngezingcezu ezimnyama.
Izingcezu zihlala zifakwa kuzo zonke izimo isiqondisi se-oblique inkambu ibheke phambili. Uma kunetshe esivele likhona emkhakheni, alikwazi ukuhlala, kungakhathalekile ukuthi elakho noma itshe lomphikisi lisenkundleni.
Uma uhlangabezana nesikwele esinqamula isikwele esimnyama ngetshe elihlukile, ungakweqa ekuhambeni okulandelayo, inqobo nje uma isikwele esingemuva kwetshe elihlukile sisalokhu singenalutho. Ugxuma ezingxenyeni eziphikisanayo bese ungabakhipha emdlalweni. Ukweqa izingcezu zakho akuvunyelwe. Awukwazi ukubuyela emuva ngaphandle nentokazi.
Uma ufinyelela ifayela le- irowu ephezulu yomphikisi ngetshe lakho, the umdlali uthola indlovukazi ngubani ongasebenza kulesi simo esikhathini esilandelayo.
La dama ikhomba ukubeka izingcezu ezi-2 esinye kwesinye. Kulokhu udinga i- ucezu obekulokhu isuswe emdlalweni.
Izinzuzo zayo ukuthi angenza ubuso bubheke phambili futhi abhekane emuva ngokungafanele, okungukuthi, ungahambisa izinkambu eziningi ubheke phambili noma uhlangothi lobuso ngendlela othanda ngayo. Ukunamathisela izingcezu eziphambene kwenzeka ngendlela efanayo. Umdlali ngamunye uthola indlovukazi enkulu. Uma ulahlekelwa yindlovukazi ngenxa yokunganakwa, ungahle uthole intokazi yesibili.
Umdlali ongowokuqala ukuthatha isinyathelo ulahlekile.
Yini inhloso yale "ntokazi"?
Kufanele uthathe ngakunye ukunyakaza okuphikisanayo komphikisi wakho okushaya noma okuvimba izingcezu zakhe.
"Dama" itholwa kanjani?
Uma umphikisi engasenakho ukuhamba, uyawina.
"INenekazi" lifanele bani?
Umdlalo webhodi "Daae" ngu kuhloswe kubadlali abafuna ukuhlola amakhono abo amasu namasu ngamabili. Iyathandwa kusukela eminyakeni eyisithupha.
Ziyini izindleko ze- "Lady"?
Ngokuya ngokusabalalisa kanye nenguqulo, i- "Dame" iyashintshashintsha phakathi ama-euro ayishumi ngemidlalo elula futhi I-63 euro kumamodeli amahle kakhulu.
Yini ebalulekile ku "Lady"?
Ngecebo, isenzo seqhinga, nokuzindla ngaphambi kwesikhathi ukuqala izitimela ngokuhlakanipha.
Ngabe ukushaya emuva nge "Checkers" kuyabekezelelwa?
Yebo, uma ukwazi ukunamathisela, unganamathisela kusuka ku- ngapha nangapha .
UQueen akabambanga: indlovukazi ihamba idayagonile, inqamula izikhala ezingenalutho eziyifunayo, ibheke phambili noma ibheke emuva, ngaphandle kokuthatha ucezu lombala ohlukile lapho isendleleni futhi ngeke ikwazi ukuguqula lokho kuhlukaniswa.
UQueen ngokubamba: uma kukhona esinye isiqeshana kudayagalidi wakho, ithoni yomphikisi, ukubamba kungenziwa kuphela uma kunesikwele esisodwa noma eziningi ezingenalutho ngemuva kocezu lomphikisi, ukubamba kuyimpoqo. Indlovukazi ayidingeki ukuthi iqhubeke nesiza ngemuva kocezu oluthathiwe. Kuyaziwa futhi emhlabeni wonke, kuphakathi kwemidlalo ethandwa kakhulu njenge: chess, Checkers kanye i-domino.
Ama-Chinese Checkers aqukethe inkanyezi enamaphoyinti ayi-6 ajoyine igridi. Lapho imigqa ihlangana khona, okungukuthi, ezindaweni, kubekwa ama-chips. Umgomo uwukuthi hambisa amathayili ayi-15 abheke iphuzu lenkanyezi ngendlela eqonde ngqo.
Imithetho iyafana naleyo yamantombazane wendabuko, enezinguquko ezilandelayo:
Ibhodi libekwe ngesikwele esimhlophe ohlangothini lwesobunxele.
Awukwazi ukwenza izindlovukazi.
Uma umdlali engathathi ucezu lapho kungenzeka, balahlekelwa ngumdlalo.
Imithetho efanayo nethayela lendabuko, ngaphandle kwalokho umdlali angakhetha ukubamba noma yikuphi ucezu hhayi inketho engcono kakhulu ngesibopho. Okuwukuphela kwenjabulo yendlovukazi phezu kwesiqephu esijwayelekile yikhono lokuhambisa nokubamba ubuso nobuso nokubheka phambili.
Okuwukuphela kwezinguquko ezivela emithethweni esemthethweni iqiniso lokuthi isibhamu asiphoqelekile nokuthi uma kwenzeka kudutshulwana uchungechunge, uma ucezu ludlula emgqeni wokugcina, luzokwenyuselwa endlovukazi futhi luzoqhubeka umdlalo njengendlovukazi.
Mhlawumbe okungajwayelekile kakhulu kwabesifazane bendabuko.
Sebenzisa ideshibhodi kasishiyagalombili kasishiyagalombili. Umdlali ngamunye unezicucu eziyishumi nesithupha futhi uzibeka ekuqaleni kulayini wesibili nowesithathu oseduzane nabo.
Izicucu ziyahamba i-orthogonally, eceleni noma ubheke phambili, kodwa ungabheki emuva.
Iphinde ibhajwe ibheke phambili noma ibheke ezinhlangothini. Ucezu olubambayo luthola ndawonye kulowo obehlala ngaphambili ucezu oluthathiwe, ecindezelwa ngokushesha (kuyo yonke inhlangano, hhayi ekugcineni kwayo ngqo).
Lapho ucezu lufinyelela kumugqa ongezansi iba yindlovukazi.
AmaQueens angahambisa izikwele eziningi ezingenalutho njengoba zifuna ubheke phambili, ubheke emuva noma ubheke izinhlangothi.
Ukubanjwa okwenziwe yiNdlovukazi kufana ncamashi nezicucu ezijwayelekile, ngaphandle kokuthi ukwazi ukweqa ngomugqa wezikwele ezingenalutho uze ufinyelele kucezu oluthathiwe.
Uma kungenzeka, Ukubanjwa kuphoqelekile futhi kufanele kwenziwe ukususa izingcezu zabaphikisi abaningi ngangokunokwenzeka.
Ukunqoba kwenziwa ngokubamba izingcezu zomphikisi ngamunye, kumenze angasebenzi noma kumshiye, nocezu olulodwa ngokumelene neNdlovukazi.
Ukuhluka lapho imithetho ifana ncamashi nomdlalo osemthethweni, kepha kulokhu kwehluka, ophela yizicucu uyawina. Ngenxa yalokho, umdlali kufanele anikeze izingcezu zakhe kumphikisi ngokushesha okukhulu.
Umthetho Wezintokazi Osemthethweni
ILadies ngumdlalo wengqondo kudlalwe phakathi kwabantu ababili.
Ngokwencazelo, laba bantu ngabadlali.
3. Umdlalo wabahloli idlalwa ebhodini lesikwele, ihlukaniswe ngezikwele ezilinganayo eziyi-100, ukukhanya okuhlukile nokumnyama
Idlalwa ezindlini ezimnyama, ezibizwa izindlu ezisebenzayo.
Imigqa ye-oblique eyakhiwe yizikwele ezimnyama i-diagonal, enengqikithi engu-17. Umugqa omude kakhulu wokudonsela uwonke unezikwele eziyi-10 futhi ojoyina amakhona amabili ebhodi, ubizwa ngokuthi idayagonali enkulu.
Ibhodi libekwe phakathi kwabadlali, ukuze idayagonali enkulu iqale ngakwesobunxele somdlali ngamunye, ngakho-ke isikwele sokuqala ngakwesobunxele somdlali ngamunye simnyama.
4. Ibhodi elibekwe ngaleyo ndlela line- ukulandela amagama:
lezisekelo: izinhlangothi zebhodi phambi kwabadlali noma amapuleti omqhele.
Amathebula: amakholomu asemaceleni.
Izitsha: imigqa evundlile enezikwele ezi-5 ezimnyama.
Amakholomu: imigqa eqondile enezikwele ezi-5 ezimnyama.
5. Ngomhlangano, amabhokisi amnyama abhalwe ngobuchule kusuka ku-1 kuye ku-50 (Ukubhalwa kweManoury). Lezi zinombolo ngeke ziphrintwe kuthileyi. Uma ubheka ibhodi ngaphambili, izinombolo ezingafakwanga ziqala kwesobunxele ziye kwesokudla, ziqala esigcawini sokuqala esimnyama esiphambanweni esingaphezulu bese ziphela esigcawini sokugcina esimnyama esiphambanweni esiphansi (Umdwebo I).
Izindlu ezinhlanu ezimnyama ezisekelweni noma amapuleti wokugcotshwa zithola izinombolo ze- 1 kuya ku-5 no-46 kuya ku-50.
Amabhokisi amahlanu amnyama asematafuleni, noma amakholomu okuqala nawokugcina, anelebula enezinombolo 6, 16, 26, 36 no-46 ngakwesobunxele, nezinombolo 5, 15, 25, 35 no-45 kwesokudla.
Izindlu ezimnyama nezedlulele esidayeni esikhulu zibizwa ama-angles ebhodi.
6. Umdlalo we-International Checkers udlalwa ngamatshe angama-20 amhlophe noma acacile futhi 20 amatshe amnyama noma amnyama.
7. Ngaphambi kokuqala komdlalo, i- Amatshe amnyama angama-20 ahlala ezikweleni kusuka ku-1 kuye ku-20, ngamatshe amhlophe kusuka ku-31 kuye ku-50. Izikwele ezisuka ku-21 kuye ku-30 ​​zizokhishwa (Umdwebo 2).
8. Ucezu yi- ihlelo elijwayelekile lamatshe nenkosikazi.
9. Ngokuya ngamatshe noma indlovukazi, izingcezu ziyahamba futhi zithathe ubujamo obuhlukile. Ukuhamba kwegumbi lisuka kwenye indlu kuya kwelinye kubizwa "ukunikela".
10. Isinyathelo sokuqala ngaso sonke isikhathi yisinyathelo somshayeli omhlophe. Abadlali ngokunye badlala ngezicucu zabo, ukuhamba ngakunye ngasikhathi.
11. Itshe kumele lidlule, ku-diagonal, kusuka endlini lapho ihlala khona kuya endlini yamahhala kulayini olandelayo.
12. Itshe elafinyelela umqhele womqhele lahlala lapho ekugcineni kwenhlangano linyuselwa ekubeni yindlovukazi. Ukugcotshwa kwetshe kuphawulwa yi egqagqana elinye itshe elinombala ofanayo.
13. Kunconywa ukuthi umphikisi yenze lokhu kwagcotshwa.
14. Itshe eliqhutshwa izintokazi liyayigcina leyo mfanelo, kodwa ayikwazi ukuhamba ngaphandle kokuthweswa umqhele.
15. Indlovukazi esanda kuthweswa umqhele kumele ilinde kuze kube yilapho umphikisi edlale kanye ngaphambi kokulingisa.
16. Indlovukazi ingasuka kolunye uhlangothi iye kolunye, isuke endlini ebekwe kuyo iye kolunye, ngokuzikhethela kwayo, ku-diagonal ehlala kuyo lapho ikhululekile khona.
Ukunyakaza kwesiqephu kuthathwa njengokuphelile lapho umdlali eseyikhiphile ngemuva kokuyihambisa.
Uma umdlali ohambayo ethinta enye yezingcezu zakhe ezidlalwayo, uphoqelekile ukuthi akushukumise.
Uma itshe elithintiwe noma elihambayo lingakadedelwa, kuvunyelwe ukulibeka kwenye indlu, uma kungenzeka.
Umdlali onokuhamba ofisa ukubeka kahle ucezu olulodwa noma ngaphezulu ebhodini kufanele, ngaphambi kokwenza kanjalo, agweme ngokusobala umphikisi ngegama elithi "AJEITO".
17. Ukuthatha izingcezu eziphikisanayo kuyimpoqo futhi kwenzeka kokubili phambili nasemuva. Ukudubula okugcwele kubalwa njengokuhamba okukodwa okudlalwayo. Kuvinjelwe baphathe izingcezu uqobo.
18. Uma itshe lithintana, lihlukaniswe, nocezu olubhekene nalo, ngemuva kwalokho kube nesikwele esingenalutho kulokho okuhlangene, Kumele weqe ucezu futhi ungene esikweleni samahhala. Ucezu oluphikisayo luyasuswa ebhodini. Lokhu kusebenza okuphelele, okungenziwa kuye phambili noma emuva, isibhamu esenziwe ngetshe.
19. Lapho indlovukazi nesiqeshana esiphikisayo sikulayini owodwa osondelene noma oqhelile komunye nomunye futhi kunesikwele okungenani esisodwa esingenalutho ngemuva kocezu olubhekene nalo, indlovukazi kufanele idlule kuleso siqephu esiphikisanayo bese ingena kunoma iyiphi indawo ekhululekile ngemuva kocezu, Zikhethele. Ukuhlinzwa okunjalo kuthathwa yile ntokazi.
20. Isitolo kufanele senziwe ngokusobala nangendlela efanele. Ukuntuleka kokukhonjiswa okucacile kwesibhamu kufana nephutha okumele lilungiswe ngokucela komphikisi. Ukuthatha kuthathwa njengokuqediwe ngemuva kokususwa kwesikhumba noma izingxenye eziphikisayo.
21. Uma itshe olithwebile lixhumana kahle nocezu olubhekene nalo, ngemuva kwalo kunesikwele esingenalutho, leyo ngxenye yesibili kufanele igxume, bese kuba eyesithathu njalonjalo, ingene esikhaleni esikhululekile ngemuva kwaleyo yokugcina. hamba. Izingcezu zomphikisi ezithwetshulwe ngaleyo ndlela, ngemuva kokuqeda ukuhambisa, isuswe ngokushesha ebhodini ngokunyuka noma ukwehla kwe-oda. Konke lokhu kusebenza kubizwa ngokuthi yi-chain shot eyenziwe yitshe.
22. Lapho indlovukazi, lapho ithatha, ngemuva kokugxuma kokuqala, iku-diagonal efanayo, eseduze noma ebangeni, ukusuka kwelinye itshe elihlukile, elikhona ngemuva kwalesi sikwele noma eziningi ezingenalutho, indlovukazi kufanele idlule kule ngxenye yesibili, bese iwela ingxenye yesithathu njalonjalo futhi ihlala isikhala samahhala, ngokuzikhethela kwakho, ngemuva kocezu lokugcina oluthathiwe.
Izingcezu zomphikisi ezithwetshulwe ngaleyo ndlela, ngemuva kokuqeda ukuhambisa, zisuswa ngokushesha ebhodini ngokunyuka noma ukwehla ngokulandelana. Lo msebenzi udutshulwa ngamaketanga owenziwe yile ntokazi.
23. Ekudutshulweni ngamaketanga akuvunyelwe yeqa izindlu.
24. Ekudutshulweni ngamaketanga, uvunyelwe ukudlula esikweleni esingenalutho kaningi, kepha ucezu oluphikisayo lungagxuma kanye kuphela.
25. Ukudutshulwa ngamaketanga kufanele kwenziwe ngokusobala, ucezu ngcezu, gxuma ngokugxuma, kuze kufike esigcawini sokugcina. Ukuntuleka kokukhonjiswa okucacile kwesibhamu kufana nephutha okumele lilungiswe ngokwesicelo sombangi.
Ukuhamba kwengcezu ngesikhathi sokudutshulwa kwamaketanga kubhekwa njengokuqediwe lapho umdlali ilahle ucezuKuphela ekugcineni noma maphakathi nokunyakaza.
27. Izingcezu ezithathiwe zingasuswa kuphela kuthileyi ngemuva kokudubula ngokuphelele. Izingcezu ezithathiwe ziyasuswa ngokushesha lapho ukunyakaza kuphela futhi ngokunyuka noma ukwehla ngokulandelana lapho begxume khona,
Ngaphandle kweziphazamiso. Ukususwa okungahambi kahle kwezingcezu ezithathiwe kulingana nephutha okufanele lilungiswe ngokucela komphikisi.
28. Ukususwa kwezicucu kuthathwa njengokuphelele lapho umdlali esusa izingcezu zokugcina ezithathiwe noma lapho i- ukwenziwa komsebenzi kumisiwe.
29. Ukuthatha izingcezu eziningi ngangokunokwenzeka esokeni lamaketanga kuyimpoqo. Ekusebenziseni lo mthetho, indlovukazi ayibeki phambili noma ibeke noma yisiphi isibopho. Ekudutshulweni, intokazi netshe balinganayo.
30. Uma izingcezu ezizothathwa, ngezindlela ezimbili noma ngaphezulu, zilingana ngenombolo, umdlali ukhululekile ukukhetha noma yikuphi kwalokhu okungenzeka, kungaba ngamatshe noma ngendlovukazi, ngokubamba okukodwa noma okuningi.
31. Kuqinisekisiwe ngomhlaka Isigaba 3.5, itshe elidutshulwe ngochungechunge lidlula kuphela kwenye yezindlu zomgwaqo ophambene wokugcotshwa, ekugcineni kokubanjwa kuseyitshe.
32. Uma ngesikhathi somdlalo kutholakala ukuthi ibhodi labekwa ngokungafanele, kubhekwa indatshana 2.4, umdlalo kufanele ukhanselwe futhi uqaliswe kabusha.
33. Izinhlinzeko zendatshana 2.8 kumele iqinisekiswe ngaphambi kokuqala komdlalo. Noma yikuphi okungahambi kahle okutholakale ngesikhathi somdlalo kuxazululwa njengendatshana 5.4.
34. Noma yisiphi isiqeshana esisikwele esingasebenzi ayisebenzi futhi ekugcineni ingasetshenziswa futhi ngokwento 5.4.
35. Uma umdlali enza okunye kwalokhu okungajwayelekile, kuphela umphikisi unelungelo lokunquma ukuthi ngabe ukungalungi kufanele kulungiswe noma kugcinwe yini. Ukungahambi kahle:
36. Dlala ukunyakaza okubili kulandelana.
37. Yenza ukunyakaza okungajwayelekile kwe itshe noma intokazi.
38. Dlala owakho izingcezu bese udlala enye.
39. Buyela emuva eyodwa umjaho usuqedile.
40. Dlala ucezu lomphikisi.
41. Dlala ucezu lapho kungenzeka ukuthwebula.
42. Susa izingcezu zomphikisi noma ungumnikazi webhodi ngaphandle kwesizathu.
43. Thatha inombolo ephansi noma ephakeme yezingcezu kunalokho okunqunywe umthetho
44. Yima ngaphambi kokuphela kwesivalo seketango.
45. Susa isiqeshana sepuleti, esime ngokungajwayelekile, ngaphambi kokuphela kwepulagi.
46. ​​Susa, ngemuva kokubanjwa, ngaphansi kwenani lezingcezu ezithathiwe.
47. Susa, ngemuva kokubanjwa, izingxenye ezingathathiwe.
48. Yeka ukudonsa izingxenye esokeni lesokhethi.
49. Ngemuva kokubanjwa, susa eyodwa noma ngaphezulu kwezingxenye zakho.
50. Uma, ngenxa yesizathu sengozi, kukhona shintsha noma ususe isikhundla ekudlaleni, leli qiniso, eliqinisekiswe ngaleso sikhathi, alinakubhekwa njengokungajwayelekile.
51. Uma umdlali enqaba ukuthobela imithetho esemthethweni yomdlalo, umphikisi unelungelo lokukuphoqelela.
52. Noma yikuphi ukunyakaza okwenziwe ngumphikisi womdlali owenze okungahambi kahle noma owenqaba ukuthobela imithetho esemthethweni yomdlalo kufana nokwamukela isimo. Ngale ndlela, ilungelo lokulungisa liyaphela.
53. Ukulungiswa okuyingxenye ye ukungajwayelekile noma ukweqa umthetho.
53. Umdlalo uthathwa njengowokudonsa lapho isikhundla esifanayo sethulwa okwesithathu futhi umdlali ofanayo ubhekene nokunyakaza.
54. Kuyaqinisekiswa ukuthi ngesikhathi 25 ukunyakaza okulandelanayo, kwenziwa ama-Checkers kuphela, ngaphandle kokuthatha noma ukuhambisa itshe, umdlalo ubhekwa njengodwetshiwe.
55. Uma kungabikho izingcezu ezingaphezu kwezintathu, izingcezu ezimbili netshe elilodwa, ucezu olulodwa namatshe amabili alwa nocezu, owamanqamu uzobhekwa njengethayi ngemuva kokuhamba okuyishumi.
66. Ukuphela kwezindlovukazi ezimbili, indlovukazi netshe noma indlovukazi ngokulwa nendlovukazi, kubhekwa njengethayi ngemuva kokuhamba okuyisihlanu.
77. Umphumela womdlalo unemiphumela emibili:
Ukunqoba kozakwethu, futhi ngenxa yalokho ukwehlulwa komunye.
Dweba lapho kungekho mdlali okwazile ukuwina.
78. Umdlali uphumelela lapho umphikisi:
Uma usuhambile, awukwazi ukudlala.
Ulahlekelwe yizo zonke izingcezu.
Uyenqaba ukuthobela imithetho.
79. Uthayi wenzeka lapho:
Ozakwethu bakumemezela ngesivumelwano sobabili.
Ukusebenzisa ukuhlinzekwa kwendatshana 6.
Lapho kungekho mdlali ongaphumelela.
80. Ngokukhipha izinombolo kusuka ku-1 kuye ku-50, ngokuya nge-athikili 2.6., Kungenzeka ukubheka ukuhamba kwezingcezu, ukunyakaza ngokunyakaza, kokubili kokumnyama nokumhlophe, ukuqopha umdlalo wonke.
81. Ukubhalwa kokunyakaza kufanele kwenziwe ngokulandelayo:
Inombolo yendlu yokuqala yengxenye elandelwa inombolo yendlu yokuqala yengxenye.
Lezi zinombolo ezimbili zilandelwa udwi (-) ukunyakaza okulula.
Uma kwenzeka kuthatha izinombolo bazohlukaniswa ngu- a (x).
82. Ukuveza okucacile, kusetshenziswa lezi zimpawu ezijwayelekile ezilandelayo ukukhombisa:
Ukudlala kahle noma ukunyakaza okuqinile:!
Ukunikezwa okulungile noma okunamandla kakhulu: !!
Ukunikezwa okubuthakathaka noma okubi 😕
Ukunikezwa okubuthakathaka kakhulu noma okubi:??
83. Kungavunyelwana ngokuthi emdlalweni umdlali ngamunye ubophezelekile yenza inani elithile lokunyakaza ngaphakathi komkhawulo wesikhathi.
84. Kulokhu, abadlali kumele:
Gqoka iwashi elikhethekile lomncintiswano.
Qopha ukuhambisa ngemuva kokuhamba, kokumnyama nokumhlophe, inkambo ephelele yomdlalo.
85. A umkhawulo wesikhathi womdlalo wonke.
86. Kulokhu, ukusetshenziswa kwewashi lomncintiswano kuyimpoqo, kodwa inothi ayidingeki.
87. Ukugqoka iwashi ilawulwa yimithetho nemithethonqubo yokuncintisana.